Fifaninanana horonantsary : vita ny sary famantarana ny RFC faha-13 | NewsMada
Fifaninanana horonantsary : vita ny sary famantarana ny RFC faha-13
Par Taratra sur 13/02/2018
Miroso ny fikarakarana ny andiany faha-13 amin’ny “Rencontres du film court” (RFC), “festival” miompana tanteraka amin’ny horonantsary fohy malagasy. Tsiahivina fa hotanterahina ny 13 hatramin’ny 21 avrily izao izany. Tapitra ny fahazoana mandefa ny antontan-taratasy amin’ny fifaninanana, hatao mandritra io hetsika io.
Araka izany, eo an-dalam-pisafidianana ireo sanganasa na “film” mendrika hiakatra amin’ny dingan’ny fifaninanana ny mpikarakara, ny fikambanana Rencontres du film court. Mialoha ny fampahafantarana ireo notsongaina isaky ny sokajy anefa, nambaran’ny mpikarakara fa efa voafidy ihany koa ny sary famantarana ity andiany faha-13 amin’ny RFC ity.
Lohahevitra momba ny aloalo
Marobe ireo nanome sosokevitra, saingy nambabo ny fon’ny mpikarakara ny zava-bitan-dRandrianalimanana a.k.a Nambinina na i Nah Randria. Mbola tanora dia tanora ny tovolahy, saingy efa mahafehy tsara ny tontolon’ny fanaovan-tsary na “graphisme”, satria nandranto fianarana manokana mikasika izany ankoatra ny fitiavana manokana ity karazana asa kanto ity.
Nosafidiny manokana ny lohahevitra maneho ny aloalo, izay mifamatotra amin’ny kolontsaina mahafaly sy antandroy. Tsy hadino ny sarina lohan’omby, nahafantarana hatramin’izay ny RFC. “Zébu”, io rahateo ny anaran’ny loka hatolotra ireo mendrika indrindra amin’ity fifaninanana ity.
Ndao hisakafo… tsara- Torolalana momba ny fikarakarana sakafo – 18 Janvier 2019 18/01/2019
ANS: mankasitraka ny vinan’ny filoha ny mpikambana 18/01/2019
Atletisma: hosokafana amin’ny « Athlétisme pour tous » ny taom-pikatrohana 18/01/2019
Atrikasa nasionaly – EPQ: omena ny governemanta vaovao ny tohin’ny tetikasa 18/01/2019
Taratry ny kanto 18/01/2019
La politique en bref: passation